Enweela Ike Ịmalite Ime Ihe Site Bank Phishers? Gaa na Nduzi Site na Semalt
Mmemme ntanetị ịntanetị na-ewere ọhụụ ọhụrụ na phishing. Ịntanetịubi bụ nnukwu akụnụba akụ na ụba na-enweghị njedebe n'ahịa. Ọtụtụ weebụsaịtị na azụmahịa azụmahịa na-eji ọwa a eme ihesite na ọtụtụ ndị ahịa n'elu weebụ. Ụlọ ọrụ ego dị ka ụlọ akụ nwere ntanetị n'ịntanetị, ebe ọtụtụ n'ime azụmahịa nwere ikeeme. Ugbo ala na-ata ahụhụ site na nsogbu nke ọtụtụ ndị omempụ nakwa dịka ọnụọgụ ịntanetị nke na-achọ ịzụta ọtụtụ nde mmadụ site na ụlọ akụụlọ ọrụ yana ndị na-arụ ọrụ azụmahịa ahụ.
Otú ọ dị, ndị omempụ na ndị omempụ ndị ọzọ nwere ohere iji usoro a. ỌtụtụỤgha na-esite n'aka ndị na-ere akụ ma ọ bụ ndị ụlọ ọrụ akụ. Phishing na-agụnye ịmepụta ibe mmepụta ibe ya yana ebe a na-ehichapụ nke otuụlọ akụ. Ndị na-eme ihe ike nwere ike iji ụzọ ndị dị ka nchọgharị na-emegharị ma ọ bụ ntanye iji mee ka ndị nwere ike ịdaba na ha nweta ihe ọmụma bara uruna peeji nke adịgboroja. N'ihi ya, ihe ndekọ gbasara akụ na ụba na-adọrọ ndị omempụ, ebe ha nwere ike ịdọrọ ọtụtụ puku ndị dị otú ahụ. Ụlọ akụna-atachi obi na ndi mmadu na-acho onu ogugu tinyere ndi ulo oru mkpuchi na achoputa ha na mpe.
E nwere ọtụtụ ụzọ nke phishing nwere ike ime. Ọ dị mkpa ịmaraha iji gbochie mwakpo ọjọọ. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a dabara adaba ka ndị ọzọ na-agụnye otu ma ọ bụ abụọ n'ime ụzọ ndị a.
Max Bell, otu n'ime ndị ọkachamara na-ahụ maka Ọkachamara ,na-enye ihe omuma nke usoro usoro phishing ndia:
Nke a na-agụnye ịmepụta ọrụ ozi ịntanetị na-ezighị ezina-egosi dị ka ngalaba corporal kwesịrị ekwesị ebe spammer na-eziga ozi ịntanetị na-aga n'ihu na bank logos na ozi nkwenye ndị ọzọ. Goolu ahụebe a bụ ịmepụta isiokwu ndị ahụ n'inye ndị ahịa ozi. Ụfọdụ n'ime usoro mgbasa ozi na-ejikarị usoro a.
Usoro a na-agụnye ụfọdụ na-ezubere iche. Ndị nwere ike ịnweta ụfọdụ ozi kọntaktịsite na onye ha na-enyocha. Ha nwere ike ịmalite ụfọdụ ụzọ echepụtara iji weghachite ozi sitere n'aka onye ọrụ. Ozi nkeonwedị ka ụlọ akụ nbanye maka ịnweta ọnụọgụ nwere ike ịdaba n'ụzọ dị otú a.
Usoro a na-agụnye ịmepụta weebụsaịtị ndị na-adịgboroja nke dị ka akwụkwọ ndị ziri ezi. Ibe ọ bụla,popup, na ọrụ ọrụ dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ego na-akwadoghị. Site na ịchọta ihe nkwekọrịta dị warara, onye omekome cyber nwere ike inwe ikeiji usoro a na-agba ume iji mee ka onye ahụ mejọrọ ahụ zaa ozi email ahụ ma ọ bụ mee usoro ego na ngalaba na-adịghị ahụkebe.
Usoro a gụnyere ịgbanye ụfọdụ ederede ma ọ bụ koodu na ihe nchọgharị nke onye ahụ. N'ihi ya,onye omekome ahụ nwere ike ịnweta ohere isi mgbe ị na-eleta ebe nrụọrụ weebụ na-akwado iwu. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume iji redirect hagaa na ebe nrụọrụ weebụ adịgboroja.
Egwuregwu Intanet bụ nsogbu na-emetụta ọtụtụ ụlọ ọrụ akụ na ụba n'oge a. Ọtụtụ ndị mmadụna-ata ahụhụ kwa ụbọchị site na mmetụta ndị omempụ na ndị omempụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụfọdụ na-eme ụfọdụ n'ime azụmahịa aghụghọ ndị a. Phishing na spammingagha na-ekpughere ndị ahịa ozi na data nye ndị a na-achọ iwepụ ọtụtụ ego. Ị nwere ike ịmụta banyere aghụghọ na phishingjiri ntuziaka a. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịchekwa usoro ntinye ego gị na nke ndị ahịa gị site na ime ka ụfọdụ n'imeinternet nche jikoro na gị na ebe nrụọrụ weebụ Source .